रक्तपातपूर्ण यमन युद्धमा सैनिक सहयोग रोक्न कङ्ग्रेमा सहमति, ट्रम्प विपक्षमा
वासिङ्टन, २२ चैत। अमेरिकी सांसदहरुले साउदी अरेबियाको अग्रसरतामा सञ्चालित रक्तपातपूर्ण यमन युद्धमा अमेरिकी सैनिक सहयोग अन्त्य गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान गरेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीति विपरीत संसदमा रिपब्लीकन र डेमोक्र्याट पार्टीका सांसदहरुले बहुमतबाट यमन युद्धमा अमेरिकी संलग्नता अन्त्य गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान गरेका हुन् । उक्त प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र यसले कानुनको रुप लिनेछ । तर राष्ट्रपति ट्रम्पले सिनेटको उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने र आवश्यक परे विशेषाधिकार (भिटो) प्रयोग गर्न सक्ने बताइएको छ ।
अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्समा उक्त प्रस्ताव २४७ – १७५ ले पारित भएको थियो । सिनेटले गत महिना नै यो प्रस्ताव पारित गरेको थियो । ह्वाइट हाउसले संसदको उक्त प्रस्ताव दोषपूर्ण रहेको जनाउँदै यसले साउदी अरेबिया समेतका खाडी क्षेत्रसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा समस्या आउने बताएको छ ।
संसदमा डेमोक्र्याट सदस्यहरुले साउदी अरेबियाको अग्रसरतामा बनेको गठबन्धनमा कङ्ग्रेसको अख्तियारी बेगर नै अमेरिकाको सहभागिता गैरसंवैधानिक हुने तर्क अघि सारेका छन् । खासगरी हातहतियारको आपूर्ति र लडाकू विमानमा तेल भर्ने कार्य संवेदनशील कार्य हो । उदारवादी सिनेटर बर्नी स्यान्डर्स जस्ता धेरै सांसदहरुले युद्ध र शान्तिका विषयमा अमेरिकी सांसदहरुले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने भन्दै वर्षौंदेखि बहस गरिरहेका छन् । “आज कङ्ग्रेसले आफ्नो जिम्मेवारी पुनः महसुस गर्दैछ, र यो यमनका सन्दर्भमा मात्र लागू हुँदैन यो भविष्यका लागि पनि हो,” यमन प्रस्तावका मूल लेखक स्यान्डर्सले संसदमा मतदानपछि बताउनुभयो ।
उहाँ सन् २०२० का लागि राष्ट्रपतिका उम्मेदवार समेत हुनुहुन्छ । उहाँले यमनको रक्तपातपूर्ण युद्धबाट तत्काल अमेरिका बाहिरिनु पर्दछ भन्नुभयो । “विदेश नीतिका मामिलामा संसदले आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई अब बेवास्ता गर्ने छैन, र यस यथार्थलाई राष्ट्रपतिले पनि सामना गर्नुको विकल्प छैन,” संसदको विदेश मामिला समितिका अध्यक्ष इलिअट एन्जेलले बताउनुभयो । यमन मामिलामा डेमोक्र्याट सांसदसँग १६ जना रिपब्लीकन सांसदले समेत समर्थन जनाएका थिए ।
ट्रम्पका कट्टर समर्थक भनेर चिनिएका जिम जोर्डन र मार्क मिडोज समेतका रिपब्लीकन सांसदले यमन युद्धमा अमेरिकाले सहयोग गर्नु उपयुक्त नरहेको बताउनुभएको थियो । सांसदहरुले यमनको गृहयुद्धमा दमन गर्न साउदी अरबले अमेरिकी हातहतियारको प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावनाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गरेका थिए । “यमनी सर्वसाधारणका घरआँगनमा खसेका सबैजसो बममा एउटै कुरा लेखिएको पाइन्छः अमेरिकामा निर्मित” डेमोक्र्याट सांसद जिम म्याकगोभर्नले बताउनुभयो । यमनमा युद्धका कारण चरम मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको छ । यमनमा एक करोड ४० लाख मानिस भोकमरिको जोखिममा रहेका अध्ययनहरुले देखाएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाईमा करिब १० हजार सर्वसाधारणको मृत्यु जथाभावी बमबारीबाट भएको जनाएको छ ।
साउदी अरेबियाको समर्थनमा रहेको यमनी सरकार र इरान समर्थित हुथी बिद्रोहीबीच लामो समयदेखि युद्ध जारी छ । मानव अधिकार समूहहरुले गृहयुद्धका कारण १० हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको जनाएका छन् । स्यान्डर्स र अरुहरुले वासिङ्टनले सैनिक हस्तक्षेपको साटो मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुने बताएका छन् । स्यान्डर्सले भन्नुभयो, “यमनको अर्थतन्त्र पुनर्निर्माणमा हामीले सहयोग गर्न सकिँदैन भने उनीहरुलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराऔं, उनीहरुलाई बम होइन खाद्यान्न दिऔं, नत्र त्यहाँको अवस्था अरु खराब हुनेछ ।”
अन्तर्राष्ट्रिय क्राइसिस ग्रुपले कङ्ग्रेसको उक्त कदमको स्वागत गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति र खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी गठबन्धनका मुलुकहरुले कङ्ग्रेसको मतदानबाट त्रसित हुनु आवश्यक छैन, आइसीजीका अध्यक्ष रब माल्लीले बताउनुभयो । (रासस-एएफपी)
सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना खुल्यो ! विभिन्न ४ पदमा दरखास्त आह्वान ! के कति योग्यता चाहिन्छ हेर्नुहोस (सूचना सहित)